sawehlor: Karaoke Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြုလုပ်နိုင်သော Program များ
Karaoke Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြုလုပ်နိုင်သော Program များ
Karaoke Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေး ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲများရဲ့ Tutorial ပြုလုပ်နည်းတွေကိုတော့ ကျနော်မတင်ပြနိုင်သေးပါ။ ကျနော် အချိန်မရတာတစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီး Edit သမားမဟုတ်တာတစ်ကြောင်းရယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ဆို ပို့စ်အဖြစ်ရောက်အောင် ကျနော်ကြိုးစားပေးမှာပါ။ ကျနော်တို့တတ်တဲ့ သိတဲ့အရာတွေဟာ အများအ တွက်ဖြစ်ဖို့ အာရုံထားဖို့လဲလိုတယ်မလား။
ကျနော်သိသလောက်ပြောရရင်တော့ Video Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ ၀ဲများဟာ အောက်ပါ ပရိုဂရမ်များတွေပါပဲ။ တစ်ခုချင်းဆီ tutorial ပြုလုပ်နည်းတွေကို နောက်မှပဲရေးတော့မယ်။
2. VirtualDub's subtitler
3. Adobe After Effects & Photoshop
အထက်ပါဆော့ဝဲ ငါးမျိုးထဲမှာ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ Video Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြု လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီငါးမျိုးတွင် Adobe After Effects နဲ့ Aegisub နှစ်မျိုးကတော့ Video Subtitle အ တွက် အသုံးများတဲ့ဆော့ဝဲတွေပဲဖြစ်တယ်။ လိုအပ်ရင်ဒေါင်းနိုင်ဖို့ တစ်ခါတည်းတင်ပေးလိုက်မယ်။
Karaoke VCD kit.rar
Adobe After Effects CS5.exe.002
Aegisub 2.1.8 setup.rar
အခြားဒေါင်းလုဒ်နိုင်သော video editing tool များဒီဆိုက်မှာလဲလေ့လာနိုင်သည်။